Shirka waxbarashada Puntland - BBC Somali
Shirka waxbarashada Puntland
28 Juunyo 2010
Image caption Shirka waxbarashada Puntland oo maanta ka dhacay Puntland
Magaalada Garowe waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayo kobcinta dhaqaalaha waxbarashada si loo daboolo baahiyaha kala duwan ee waxbarashada taas oo looga gol leeyahay in la helo waxbarasho tayaysan.
Kulankan oo ay qabanqaabisay kulliyadda tababarka macallimiinta Garowe (GTEC) waxaa ka qaybgalay hay'adaha waxbarashada ee caalamiga iyo kuwa dawladda, xubno ka socda golayaasha dawladda, ganacsato iyo dad khibrad u leh waxbarashada.
Weriyaha BBCda Axmed M.Cali ayaa sidii kulankaasi u dhacay ka waraystay hormuudka kuliyadda macallimiita Garowe Prf. Cabdirisaaq Axmed Sheekh (Shoole) wuxuuna waydiiyay qodobbada ugu muhiimsan ee kulankaas diiradda lagu saaray.
Maqal Waa maxay ahmiyadda uu leeyahay shirka ammaanka ee Munich?
Waa maxay ahmiyadda uu leeyahay shirka ammaanka ee Munich?
Maqal Jigjiga: Dukaan lagu iibiyo deefta xoolaha Soomaalida iyo kheyraadka dhirta
Jigjiga: Dukaan lagu iibiyo deefta xoolaha Soomaalida iyo kheyraadka dhirta
Maqal Madaxweyne Ramaphosa ma mideeyn doona xisbiga kala qeybsamay ee ANC?
Maqal Somaliland: Xog ku saabsan barnaamijka baro oo qiimee muwaadinkaaga
Somaliland: Xog ku saabsan barnaamijka baro oo qiimee muwaadinkaaga
Maqal Faallo: Geerida hogaamiyihii mucaaradka Zimbabwe
Maqal Falanqayn: Is casilaadda Jacob Zuma
Falanqayn: Is casilaadda Jacob Zuma